Ukwala komsebenzi | Law & More B.V.
Blog » Ukwala umsebenzi
Kuyacaphukisa kakhulu ukuba imiyalelo yakho ayilandelwa ngumqeshwa wakho. Umzekelo, umqeshwa ongekhe uthembele kuye ukuba avele kumgangatho wokusebenza ngeempelaveki okanye lowo ucinga ukuba ikhowudi yakho yokunxiba ecocekileyo ayisebenzi kuye. Ukuba oku kwenzeka kaninzi kungakhathaza kakhulu. Ngethamsanqa, umthetho ubonelela ngesisombululo soku. Kuzo zombini ezi meko, nakwezinye ezininzi, usenokungavunyelwa ukusebenza. Kule nqaku sichaza ukuba kunjani kwaye unokwenza ntoni ngawo njengomqeshi. Kuqala siza kungena kweyiphi imiyalelo onokuthi uyinike njengomqeshi. Emva koko, siza kuxoxa ukuba yeyiphi na imiyalelo anokuyala umqeshwa kwaye kwelinye icala, eya kuthi ikhokelele ekwenqabeni umsebenzi. Okokugqibela, siza kuthetha ngeziphi iindlela onazo njengomqeshi zokujongana nokwala umsebenzi.
Yeyiphi imiyalelo uvumelekile ukuba uyinike njengomqeshi?
Njengomqeshi, unelungelo lokuyalela ukukhuthaza umqeshwa ukuba asebenze. Ngokomgaqo, umqeshwa wakho kufuneka alandele le miyalelo. Oku kulandela kulwalamano lwegunya phakathi komqeshi nomqeshi ngokwesivumelwano sengqesho. Eli lungelo lokufundisa lisebenza kwimigaqo enxulumene nomsebenzi (umz. Imisebenzi yomsebenzi kunye nemigaqo yempahla) kunye nokukhuthaza ucwangco ngaphakathi kwenkampani (umz. Iiyure zokusebenza, imigangatho yokuziphatha yabasebenzi kunye neenkcazo kwimithombo yeendaba zentlalo). Umsebenzi wakho unyanzelekile ukuba alandele le miyalelo, nokuba ayibonakali kwigama lesivumelwano sengqesho. Ukuba uyasilela ukwenza njalo kwaye ngokuzingisileyo uyakwenza oko, lityala lokwala umsebenzi. Nangona kunjalo, inani leempawu zisebenza apha, ezichazwe apha ngezantsi.
Isabelo esivela kuwe njengomqeshi akufuneki ukuba silandelwe ukuba asikho ngqiqweni. Ukwabiwa kusengqiqweni ukuba kunokubonwa njengenxalenye yesivumelwano sengqesho kwimeko yokuba ngumqeshwa olungileyo. Umzekelo, isicelo sokusebenza ixesha elongezelelekileyo evenkileni ngexesha leKrisimesi elixakekileyo sinokuba sisabelo esisengqiqweni, kodwa hayi ukuba sikhokelela kwiveki yokusebenza engaphezulu kweeyure ezingama-48 (ekungekho mthethweni kuyo ngenxa yecandelo lama-24 1 woMthetho wezabaSebenzi). Nokuba ukwabiwa kufanelekile kwaye ke ukwaliwa komsebenzi kuxhomekeke kwiimeko zetyala kunye nezinto ezichaphazelekayo. Izichaso zomqeshi kunye nezizathu zomqeshi zokunikezela isabelo kufuneka zithathelwe ingqalelo. Ukuba kunokucingelwa ukuba umqeshwa unesizathu esingxamisekileyo sokwala ukwabiwa, akukho mbuzo wokwala umsebenzi.
Ukulungiswa okungafaniyo kweemeko zokusebenza
Ngapha koko, umqeshi akanakho ukutshintsha imeko enye. Umzekelo, umvuzo okanye indawo yempangelo. Naluphi na utshintsho kufuneka luhlale lusenziwa ngokubonisana nomqeshwa. Ngaphandle koku kukuba kwezinye iimeko kuvunyelwe ukuba ibandakanyiwe kwisivumelwano sengqesho okanye ukuba wena, njengomqeshi, unomdla onzulu wokwenza njalo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga noku, siza ku Law & More sikulungele ukukuphendulela.
Umsebenzi angayala nini imiyalelo yakho?
Ukongeza kwinto yokuba umqeshwa angawala isabelo esingenangqiqo, kwaye, ngaphezulu, angangatshintshi imeko enye yokusebenza, kukwakho noxanduva olongezelelekileyo oluvela kwiimfuno zomsebenzi olungileyo kunye nenqanaba lomqeshi. Oku kubandakanya imigangatho yempilo nokhuseleko. Umzekelo, umqeshwa kufuneka athathele ingqalelo imeko yomzimba yabasebenzi kwimeko yokukhulelwa okanye yokungakwazi ukusebenza, umzekelo. Umsebenzi akanakho ukucela umsebenzi ukuba alandele imiyalelo ebeka umngcipheko kwimpilo yakhe kwaye kufuneka aqinisekise iimeko ezikhuselekileyo zokusebenza. Ukungavumi ukuya empini ngenxa yesazela kufuneka kuthathelwe ingqalelo, ngaphandle kokuba umsebenzi wenziwa ngendlela efanelekileyo.
Ukuba imiyalelo yakho iyangqinelana nale migangatho ichazwe apha ngasentla kwaye umsebenzi uyaqhubeka nokuyala ngendlela eqhubekayo, oku kuthetha ukwala umsebenzi. Kukho amatyala aqhelekileyo apho umbuzo uthi ngaba kukho ukwaliwa komsebenzi. Umzekelo, kwimeko yokungakwazi ukwenza umsebenzi, (kugula) ukungabikho emsebenzini okanye umqeshwa ongafuni ukwenza imisebenzi efanelekileyo ngenxa yokuba bengaphandle kwemisebenzi yakhe yesiqhelo. Nokuba kukho ukukhanyelwa komsebenzi ngokuxhomekeke kwiimeko zetyala kunye nezichaso zomqeshwa wakho, ke kububulumko ukuba uqaphele kwaye ufune ingcebiso yezomthetho ukuba kunyanzelekile. Ngokuqinisekileyo oku kuyasebenza xa ucinga ngokulandela amanyathelo. Ngapha koko, ukuba unamathandabuzo malunga nokuba ngaba kukho ukungabinakho ukusebenza emsebenzini ukuba umqeshwa wakho uyala ukusebenza ngenxa yesi sizathu, kuhlala kubalulekile ukuba ulinde uluvo lonyango lomsebenzi wezempilo nokhuseleko okanye ugqirha wenkampani. Amanye amatyala enyanisweni ayimeko ezicace gca zokwala umsebenzi. Umzekelo, ukuba, ngexesha labasebenzi abangaphangeliyo, unike umqeshwa wakho imvume yokuthabatha ikhefu ukuba angafikeleleka kubaxumi, kodwa emva koko aye eholideyini kwindawo ekude kwaye engafikeleleki kwaphela.
Iziphumo zokwala umsebenzi
Ukuba umqeshwa wakho akawamkeli umsebenzi wakhe, wena njengomqeshi ngokwendalo ufuna ukungenelela ngokukhawuleza ukuze ugcine igunya lakho. Kubalulekile ukuthatha amanyathelo afanelekileyo kule meko. Unokumisela amanyathelo oluleko kumqeshwa. Oku kunokubandakanya ukukhupha isilumkiso esisemthethweni okanye ukubamba intlawulo yeeyure zokusebenza ezingavunyelwanga. Kwimeko yokwala okuphindaphindiweyo ukusebenza, kunokwenzeka ukuthatha amanyathelo afikelela kude njenge: ukugxothwa okanye isishwankathelo ukugxothwa. Ngokomgaqo, ukwala ingqesho sisizathu esingxamisekileyo sokugxothwa.
Njengoko ufundile ngasentla, umbuzo wokuba kunqatshelwe nini ukusebenza kwaye ngawaphi amanyathelo afanelekileyo anokuthathwa kule meko axhomekeke kakhulu kwiimeko eziphathekayo kunye nezivumelwano ezenziwe phakathi komqeshi nomqeshwa. Ngaba unayo nayiphi na imibuzo malunga noku? Nceda unxibelelane Law & More. Iqela lethu elikhethekileyo lisebenzisa indlela yobuqu. Sikunye nawe siza kuvavanya amathuba akho. Ngesiseko solu hlalutyo, siya konwaba ukukucebisa ngamanyathelo afanelekileyo alandelayo. Ukuba oku kuyimfuneko, siya kukunika iingcebiso noncedo ngexesha lenkqubo.
Post edlulileyo Alimony
Post Next Umthetho wokuyeka inkonzo